Ogaden News Agency (ONA) – Labo Sarkaal oo Khaliiji Ah oo Dalka Yemen Lagu Dilay & Wadahadal Geneva Kabilaabmay.
Labo Sarkaal oo Khaliiji Ah oo Dalka Yemen Lagu Dilay & Wadahadal Geneva Kabilaabmay.
Posted by Dayr	/ December 15, 2015
Sarkaal Sare oo u dhashay Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Sarkaal kamid ahaa ciidamada Isku Taga Imaaraadka Carabta ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay dalka Yemen. Arrintan ayaa kusoo aadaysa wakhti yar uun kahor wadahadal nabadeed oo lagu wado inuu maanta furmi doono kaasoo u dhaxeeya falaagada xutiyiinta ah iyo dowladda Yemen.
Labada sarkaal ayaa lagu dilay meel u dhow mid kamid ah meelaha furimaha dagaalka ee la isku hor fadhiyo dagaalka kasocda dalka Yemen, gaar ahaanna magaalada Taciz. Waxaa lagu kala magacaabi jiray saraakiishan Khaliijiga ah ee dhintay Kornayl Abdullahi Al-Sahyan oo Sacuudiyaan ah iyo Sultan Al-Kitbi oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka Imaaraadka Carabta.
Xulafada uu Sacuudigu horseedka u yahay ayaa dagaal adag ugu jira sidii dib loogu soocelin lahaa Madaxwaynihii Yemen Abdrabboo Mansour Hadi tan iyo sanadkan badhtamihiisii. Waxay isbahaysigu ka saareen xuutiyiinta iyo kooxaha ay gacan saarka leeyihiin inta badan koofurta Yemen. Laakin goobahaas waxay weli yihiin kuwo aan xaaladoodu daganayn.
Wadahadallada nabadda ee muddada dheer dib loo dhigayay ayaa lagu wadaa ineey Talaadada maanta ah bilaabmi doonaan, xabbad joojin ku meel gaadh ah ayaa la filayaa ineey hirgasho. Hase yeeshee isku dayyo hore oo la doonayay in dhinacyada ku hardamaya dalka Yemen xabbad joojin lagu kala dhex dhigo ayaan lagu guulaysanin.